Armenia : Nodidiana Hanao Hetsika ny Tafika Taorian’ny Nivoahan’ny Lahatsarim-Pamolahana Iray Tety Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Anne-Cecile Guthmann
Voadika ny 08 Jolay 2018 14:31 GMT
Mitohy mivezivezy ety anaty aterineto ny lahatsary iray mampiseho ny toa fandementsaina mibaribary natao tany anivon'ny andian-tafika iray nitoby tao Nagorno Karabakh, faritany iray ifandrana be sy mitaky fizakantena ao anatin'i Azerbaïdjan ary Armeniàna ny ankamaroan'ny mponina ao aminy.
Notsoahana aloha ilay lahatsary tao amin'ny Youtube talohan'ny niverenany nivoaka tany amin'ireo tranonkala hafa fizaràna lahatsary anaty aterineto, toy ny Daily Motion. Na tsy zavatra vaovao aza ny famolahana sy ireo fahafatesana ivelan'ny ady tao anatin'ny tafika armeniàna, tao anaty vanimpotoana saropady indrindra no nisy ny fandefasana ity lahatsary ity, taorian'ny andiam-pahafatesana nifanesy tao anivon'ny tafika nanomboka tamin'ny fiandohan'ny lohataona. Naneho hevitra momba io fandefasana io tao amin'ny aterineto ny bilaogy Unzipped, nizaràny ny ahiahiny, ary niantsoany fampanaovana fanadihadiana maika [angl].
Androany ity lahatsary ity no napetraka tao amin'ny Youtube ary manomboka miely ao amin'ny Facebook. Mitondra ny lohateny hoe (amin'ny tney armeniàna) Բանակի իրական դեմքը’ “Ny tena endriky ny tafika”, fotoana iray fandementsaina no asehony ary herisetra ara-batana ao anivon'ny tafika armeniàna. Tsy misy mihitsy ahafantarana izay loharano nahazoana ilay lahatsary : tsy misy fantatra na ny toerana na ny andro nandraketana azy io. Ny azoko ambara fotsiny dia hoe telefaona finday no nanatontosàna azy.
Nezahan'ny ministera armeniàna misahana ny fiarovana natao aloha ny nanamaivana ilay raharaha, tamin'ny filazana mihitsy aza hoe lahatsary namboamboarina ilay izy. Ny sasany, indrindra fa ireo Armeniàna monina any ivelany, dia nanambara ihany koa hoe mifanohitra amin'ny tombontsoam-pirenena ny fandefasana azy iny. Tsy oe nandrisika fotsiny ny fandefasana azy iny ny bilaogy “Martuni or Bust” fa koa naneho mibaribary ny tsy fanekeny ny zavamisy naseho tao.
Mba misy ve olona na fikambanana eo anivon'ireo zanaka ampielezana mba hiresaka amin'ireo solontena politika ao Erevan ny momba ireny fanararaotana sy fomba fitondra ratsy ao anivon'ny tafika ireny ? Ho vitan'izy ireo hatao ve ny hitaky ny hitondrana ho eo anatrehan'ny fitsaràna miaramila ilay manamboninahitra veta saina hita tao anatin'iny lahatsary iny, noho ny fanambaniana sy fanalàna baraka nataony an'ireo miaramila armeniàna tanora ? Raha ny marina, raha misy manerana ny firenena ny toa io, dia mitondra ho amin'ny fametrahana fanontaniana mikasika ny fiarovam-pirenena katsahanareo. Mifohaza! Rahampitso, sao ho tara loatra !
Na izany aza, ao amin'ny bilaogy Unzipped, i Ara Manoogian, mpanoratra ihany koa ny “Martuni or Bust”, dia nitatitra fa raha tokony ho nenjehana noho ny antso nataony, dia fandrahonana ho faty no atao aminy. Mitatitra ihany koa anefa izy fa nampanantena ny hikaroka izay nahavita izany fihetsika izany ny minisitry ny fiarovana.
Kanefa, araka ny resaka tsy loabody ataon'ny Unzipped ao anatin'ny lahatsoratra faharoa, efa tsy hitan'izy ireo intsony izay azony atao hanakanana ny fandefasana ilay lahatsary, izay ry zareo vao tena nanomboka nikorapaka.
Fony nalefanay voalohany ilay lahatsary, dia nolazain-dry zareo aloha fa lahatsary namboamboarina ka tsy nasiany fanadihadiana savaranonando akory. Tao anatin'ny fanambaràny voalohany ny ministeran'ny fiarovana dia nilaza mihitsy aza fa mety hisy ny fepetra horaisina manoloana ireo niavian'ilay lahatsary, saingy tsy nisy tanteraka ireo andrana poakaty rehetra nataony hanesorana tanteraka ireo sary tao amin'ny aterineto.
Raha niteny nanoloana ny parlemanta ny minisitra misahana ny fiarovana dia nilaza ilay lahatsary ho “filazàna lainga”. “Filazana lainga momba ny tafika eto amintsika fotsiny iny ary tsy mino aho hoe tena nisy tokoa izay zavatra naseho tao anatin'iny lahatsary iny”, hoy izy. Avy hatrany dia nanondro ny “fahavalo” ireo lazaina ho faribolan'ny tia tanindrazana.
Na izany aza, ora vitsy taorian'ilay fanambaràn'ny ministera, dia efa fantatra ilay miaramila veta saina ary nalefa tany am-ponja. Ary efa nahazo fanamafisana tamin'ny fomba ofisialy izahay ny amin'ny maha-tena marina ilay lahatsary.
Araka ny nampahafantarin'ny Unzipped an'ireo mpamaky azy, nisy manamboninahitra iray nahiboka am-ponja ary anaovana fanadihadiana.
Ho an'ireo mpikatroka ety anaty aterineto izay voalohany nampahafantatra sy nandefa ilay lahatsary, na azo heverina ho toy ny fandresena aza ny fivoaran-draharaha misy amin'izao fotoana izao, tsy ho izany velively ho antsika rehetra, isan'izany ny MoD, raha tsy mipetraka mandinika akaiky sy mamaha ireo olana midadasika momba ny kolikoly sy ny fomba fitondra ratsy misy ao anivon'ny tafika ireo mpitarika armeniàna ary manomboka fanavaozana ifotony mba hanakanana ny fiparitahan'ny fomba ratsy sy veta tahaka ireny, ary koa ireo “famonoantena” sy fahafatesana ivelan'ny ady. Ao anatin'ny tontolon'ny aterineto, efa fotokevitra nilaozan'ny toetrandro ny fanarontsaronana ny zavamisy.
Tohizan'i “Martuni or Bust” ny fampahafantarana ireo mpamaky azy ny tohiin'ilay raharaha, ao amin'ny http://aramanoogian.blogspot.com.
Sary: Graffiti tao Erevan, any Armenia, an'i Garik Engibaryan sy Adgar Amoroyan iampangàna ireo famonoantena, ireo fahafatesana ivelan'ny ady ary ireo famolahana atao any anivon'ny tafika armeniàna, nalaina tao amin'ny Unzipped.